चिनी रोग (मधुमेह) बाट शहर मात्र हैन, गाउँ पनि असुर’क्षित : यसबाट कसरी जोगिने ? – Sadhaiko Khabar
चिनी रोग (मधुमेह) बाट शहर मात्र हैन, गाउँ पनि असुर’क्षित : यसबाट कसरी जोगिने ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक २८, २०७८ समय: ९:२४:३१
चितवन / सहरी खानपान ग्रामीण क्षेत्रमा भित्रिएसँगै मधुमेहबाट गाउँ पनि असु’रक्षित बन्दै गएका छन् । परीक्षणको दा’यरामा नआउने हुँदा जटि’ल अवस्थामा पुगेपछि ग्रामीण क्षेत्रका बिरामी उपचारका लागि आउन थालेको चिकित्सक बताउँछन् । पहिले–पहिले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग हुने गरेकामा पछिल्ला दिनमा तयारी खानाको प्रयोग बढेसँगै मधुमेहको सम’स्या देखिन थालेको हो ।
ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको परिश्रम घ’टेको र खानपान सहरको जस्तै हुन थालेकाले रो’ग देखिन थालेको हो । दैनिक खाजा र खानामा सहरिया चाउचाउ, बिस्कुट, पास्ता, तयारी पेय पदार्थजस्ताको प्रयोग बढी हुने गरेको छ । यससँगै मा’सु र म’दिराको प्रयोग पनि बढेको छ ।
भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा कालिदास अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रमा सहरको रहनसहन भित्रिएसँगै मधुमेहको समस्या पनि बढ्न थालेको बताउनुहुन्छ । खानपानमा परिवर्तन, मा’छा, मा’सु, मदि’राजस्ता वस्तुको उपभोग बढेकाले गाउँमा बस्नेहरूमा समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “गाउँमा पनि क्रयशक्ति बढ्यो, सहरको जस्तै खानपिन भयो, यसले सम’स्या बढाएको छ ।”
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरका फिजिसियन डा प्रकाश अर्याल सहरमा धेरै मानिस भएर धेरै बिरामी आएको भए पनि जनसङ्ख्याका अनुपातमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्तिकै समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जो गाउँमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि खानपानमा ध्यान दिनुप¥यो, नियमित परीक्षण गर्नुपर्यो ।”
परीक्षण गरिरहनुपर्ने :
घरमा अन्य सदस्यलाई मधुमेह नभएमा ३५ वर्षपछि नियमित परीक्षण गर्नुपर्ने जनाउँदै उहाँले घरमा कसैलाई मधुमेह भएमा २० वर्षको उमेरदेखि नै परीक्षण गरिरहनुपर्ने उहाँको सुझाव छ । मो’टोपना, उच्च र’क्तचाप र वंशाणुगत सम’स्या भएमा २० वर्षभन्दा कम उमेरकाले पनि परीक्षण गराइरहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस्ता वर्गले हरेक वर्ष परीक्षण गर्नुपर्छ । अन्यको हकमा तीनदेखि पाँच वर्षमा परीक्षण गर्न सकिने डा अर्यालको सुझाव छ । डा अर्याल, “सहरकाले मात्रै होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा बस्नेले पनि नियमित परीक्षण गर्नुपर्यो ।”
चितवन मेडिकल कलेजका इण्डोक्राइनोलोजिष्ट डा सौरव खतिवडाले शरीरमा चिनीको मात्रा पचाउन सक्ने क्षम’तामा ह्रा’स आयो भने रग’तमा चिनीको मात्रा बढ्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ, “यो अवस्थालाई मधुमेह भनिन्छ ।
खाली पेटमा र’गत परीक्षण गर्दा १२६ मिलीग्राम परडेसिलिटरभन्दा बढी र खाना खाएपछि २०० भन्दा बढी भएमा हामीले मधुमेह (डाइबिटिज) भन्दछौँ ।” मधुमेह भएपछि खानपान, व्यायाम र औषधि यी तीन चिजको सहायताले सुगर (चिनी)लाई निश्चित विन्दुमा नि’यन्त्रणमा राख्न आवश्यक रहेको उहाँ औल्या’उनुहुन्छ ।
मधुमेह लाग्नै नदिन पनि सत’र्कता अपनाउन सकिने जनाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुख्य कारण मोटोपन र विलासी जीवनशैली नै हो । यसलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । अहिले धेरै मानिस लामो समय कुर्चीमा बसेर काम गर्ने, शारीरिक कसरत नगर्ने गरेको छन् । यसले गर्दा शरीरको ग्लुकोज पचाउने प्रणाली र इन्सुलिनले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्, यसले मधुमेह बनाउँछ ।”
दैनिक आधा घण्टा पसिना आउने गरी व्यायाम गर्न सुझाव दिँदै उहाँले भन्नुहुन्छ, “वंशाणुगतरूपमा भए पनि खानपान र व्यायाम गर्न सकियो भने मधुमेह हुने समय पाँच-दश वर्ष पछाडि धकेलिन्छ । शरीरलाई आवश्यक पर्ने मात्रा मिलाएर खान पर्छ । हाम्रो खानामा भात, ढिलो बढी खान्छौँ । यसबाट थोरै खाँदा पनि धेरै ग्लुकोज बन्ने भएकाले भात र ढिलोको मात्रा कति खाने भन्ने जानकारी लिन ज’रुरी छ ।”
आफ्नो तौल, उमेर र उचाइअनुसार डाइटीसियनसँग परा’मर्श गरेर खाना खाने बानी बसाल्नु राम्रो हुने उहाँको सुझाव छ । सामान्यतया हामीले खाने चामल बिहान डेढ मुठी र बेलुका एक मुठी खाँदा पर्याप्त हुने जनाइएको छ । उहाँले एकैपटक धेरै नखान र पटक–पटक थोरै–थोरै गरेर खान सुझाव दिनुहुन्छ ।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष फिजिसियन डा भोजराज अधिकारी मधुमेह आफैँमा रोग नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुहुन्छ, “मधुमेह रो’ग होइन, रो’ग हुनसक्ने कुराहरूको सङ्ग्रहमात्रै हो ।” मधुमेहका कारण आँ’खा, मु’टु, मि’र्गाैला, खु’ट्टा, र’गतका न’लीमा हा’न्यो भने बल्ल त्यो रो’ग हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “मधुमेहलाई राम्रोसँग नि’यन्त्रण गर्यौँ भने स्वस्थ जीवन जीउन सकिन्छ ।”
स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन र मधुमेही छु कि छैन भनेर वर्षमा एकपटक मधुमेह परीक्षण गर्न उहाँले सु’झाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षमा एकपटक परीक्षण गरियो भने करिब–करिब फेरि मधुमेह लाग्ने सम्भावना त्यो वर्षलाई १२ प्रतिशतले ट’र्छ ।” – नारायण अधिकारी / रासस